Pathein Catholic Diocese
I COME TO SERVE (Matthew 20:28)
Present Bishop Former Bishop
Pathein Zone Myaung Mya Zone Hinthada Zone
sacred heart minor seminary st. martin catholic catechists training school st. john's private school
Vatican Vatican New NISCORT FABC UCA News CBCM NCMS
Diocese of Pathein Diocese of Mawlamying Diocese of Pyay
Diocese of Hakha Diocese of Lashio Diocese of Bamaw Diocese of Myitkyina Diocese of Kalay
Diocese of Phakon Diocese of Loikaw Diocese of Taungngu Diocese of Kengtung
ရဟန်း ၇၀ ပါးအား ၄ရက်တာသင်တန်းပေး
ရဟန်းဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာကက်သလစ်သာသနာများမှ
ရဟန်းတော် (၇၀) ပါးကို ၄ ရက်တာ သင်တန်းပေး
ရဟန်းဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း (Priestly joy - Renewal course for Priests) ခါင်းစဉ်ဖြင့် ရဟန်းတော်များ ဝတ်စောင့်ပွဲ ကို ပုသိမ်ဂိုဏ်းအုပ်သာသနာ မရမ်းချောင်း တွင် သြဂုတ်လ ၂၁ မှ ၂၄ ထိ ၄ ရက်တာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကက်သလစ် သာသနာအသီးသီးမှ ရဟန်းတော် (၇၅) ပါး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဝတ်စောင့်ပွဲခြင်း အခမ်းအနားကို ဖိ လစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဖိုကိုလာရီအဖွဲ့ (Work of Mary ) မှ စန်ကားလို့စ် သာသနာဆရာ တော် Most Rev. Gerardo Alminaza. D.D. (Spirituality နှင့်ရောမမြို့. Collegio Filippino ကျောင်းမှ ဝိညာဉ် လမ်းညွန် Rev. Fr. Andrew G. Recepcion, STD မှ ဦး ဆောင် ပို့ချကာ ခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းတွင် ယနေ့ခေတ်တွင် ရ ဟန်းတစ်ပါးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်း နိုင်ရေးအတွက် သံဓိဌာန်တခု လိုအပ်ပြီး အ ခြေအ နေကို သုံးသပ် ခြင်းသည် လုပ်ငန်း ဆောင်တာအမျိုးမျိုးဖြင့် သိုးထိန်းတာဝန် ထမ်း ဆောင်လျှက် အချိန် ကုန်ဆုံးရသော ရဟန်းတစ်ပါး၏ ပုံရိပ်ကို ဖမ်းဆုတ်မိ စေ ကြောင်း ရဟန်းများစွာတို့သည် သိုးထိန်း တာဝန်ကို တက်ကြွစွာထမ်းဆောင် နေရာ မှ ခေတ္တအားယူရန် ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် သင် ယူ လေ့လာရန် အချိန် မရှိကြသောကြောင့် ယခုသင်တန်းသည် ရဟန်းဘဝ၏ ပျော်ရွှင် ခြင်းကို ရှာဖွေနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း ဖြစ် ကြောင်း သင်းတန်းဦးဆောင်သူများက ရ ဟန်းတော်များကို ယခုသင်တန်းနှင့် ပတ် သက်၍ မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဘာသာဝင်များသည် အတိတ် ကာလထက် ပို၍ ရဟန်းများအား အသင်းတော်၏ အခက်အခဲများ အထူး သဖြင့် ဆင်းရဲသားများအတွက် နားလည် နိုင် စွမ်းရှိသူများ၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးနိုင် သူ များ၊ ပေါင်းစည်းပေးသူများ၊ ဘုရားရှင် နှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခဲ့ရခြင်းကို ပြော ဆိုသည့်သိုးထိန်းအစစ် အမှန်များ၊ ပျော် ရွှင်ခြင်းနှင့်စုံလင် ခြင်းကို ရောင် ပြန် ဟပ် စေလိုသူများအဖြစ် မြင်လိုကြကြောင်း ဆ ရာတော် ကြီး Most Rev. Gerardo Alminaza. D.D. ဆိုသည်။
ယခု သင်တန်းပေးခြင်း၏ ရည်ရွယ် ချက်များမှာ
၁) ရဟန်းများသည် ကိုယ်၊ စိတ် ၊ နှ လုံး သုံးပါးအား အနားယူနိုင်သည့် အငွေ့အ သက်ပေးခြင်းဖြင့် သိုးထိန်းလုပ်ငန်းမှ ခေတ္တ အနားယူနိုင်ရန်၊
၂) ပေါင်းစည်းခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် သန့် ရှင်း မြင့်မြတ်သော လမ်းသို့ လျှောက် လှမ်း နိုင်ရေးအတွက် သာသနာဆိုင်ရာ ဝိညာဉ် အသက်တာကို ထောက်ရှုဆင်ခြင်ရန် ၊
၃) သိုးထိန်းခေါင်းဆောင် နှင့် သာသ နာ ပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ရစေ ရန် တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းတွင် ပါဝင် တက်ရောက်သူ ရဟန်းများသည် မိမိတို့၏ တစ်ဦးခြင်းနှင့် ရ ဟန်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများနှင့် အတူ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ၊ အသင်းတော် ဆိုင်ရာ ဓမ္မဗေဒနှင့် ရဟန်း ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်များကို ထောက်ရှုဆင်ခြင် ခဲ့ကြပါ သည်။ သင်တန်းတက် ရောက်သူများ အ နေဖြင့် အတူတကွ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့် အတွေ့ အကြုံ ဝေမျှခြင်းများဖြင့် တက်ကြွစွာ ပါဝင် ခဲ့ကြပါသည် ။
အိမ်​မဲသာသနာ​ကျောင်းထိုင်​ Rev. Fr. Charles ၏ ရဟန်းဝါ​တော်​ ၂၀ ပြည့်​ ​ကျေးဇူး​တော်​ချီးမွမ်းခြင်း
ပုသိမ်​ဆရာ​တော်​ ဂျွန်​မန်းဆိန်းဟှီ သည်​ ၂၇၅၈ ခုနှစ်​ ကရင်​အမျိုးသားနှစ်​သစ်​ကူးပွဲ အဖွင့်​အမှာစကားနှင့်​ အား​ပေးစကား​ပြောကြား
လက်​ခုပ်​​ကျေးရွာ မယ်​​တော်​ လိုင်​ဂူ​တော်​သစ်​ အား ​ကောင်းချီး​ပေးဖွင့်​ပွဲ
​ ​တောင်​​ချောင်းသာသနာရှိ သာသနာ့ ခန်းးမ​ဆောင်​အား ​ကောင်းချီး​ပေး ဖွင့်​လှစ်​ခဲ့..
အဖဆရာတော် ဂျွန်မန်းဆိန်းဟှီ၏ (65) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့
ပုသိမ်​ဂိုဏ်းအုပ်​သာသနာ ​ဗဟိုသာသနာ့အကျိုး​တော်​​ဆောင်​အဖွဲ့ နှစ်​ပတ်​လည်​ အစည်းအ​ဝေး
Evaluation General Assembly, Pathein Diocese.
ပုသိမ်​ဂိုဏ်းအုပ်​သာသနာမှ ရဟန်း​တော်​များ လစဉ်​ ဝတ်​​စောင့်​ပွဲ
ပုသိမ်​ဂိုဏ်းအုပ်​သာသနာ ပိုင်​ ကျိုက်​လတ်​သာသနာ စာဖြူစု​ကျေးရွာ၌ အပြစ်​မဲ့သ​န္ဓေယူ​သောသခင်​မပွဲအား ကျင်းပခြင်းပုံရိပ်​များ
ပုသိမ်​သာသနာ နှင့်​ လွိုင်​​ကော်​ သာသနာမှ commissions များ အားသာချက်​၊ အားနည်းချက်​များကို အပြန်​အလှန်​ ​ဆွေး​နွေး​လေ့လာ
​တောင်​ယာကုန်းသာသနာ ငကြွက်​ကုန်း​ကျေးရွာ၌ ​ခေါင်း​လောင်းစင်​ဖွင့်​ပွဲနှင့်​ ခရစ္စတူးတိုင်​ ​ကောင်းချီး​ပေး ပွဲ
ချောင်းစောက်ကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးများတည်းခိုဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ
ပုသိမ်​ဂိုဏ်းအုပ်​သာသနာမှ စီစတာရ်​ကြီးများ ဂျူဗလီ
ပုသိမ်​ဇုံမှ ရဟန်း​တော်​များ ​ရွေးကုန်းသာသနာတွင်​ လစဉ်​ ဝတ်​​စောင့်​ခြင်း
နိုင်​ဝင်​ဘာ ၂ ရက်​​နေ့ ​သေလွန်​ကုန်​​သော ဝိညာဉ်​များအတွက်​ဆု​တောင်း​ပေးရ​သော​နေ့ ..
ပုသိမ်​ဆရာ​တော်​ ဂျွန်​မန်းဆိန်းဟှီ၏ ဆရာ​တော်​ ဝါ ၁၅ ဝါ ဂျူဘီလီ
၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင်​နှစ်​ စိန်​ပီတာ​နေ့အထူး​ကျောင်း ဖွင့်​ပွဲ
​ဇောင်းတန်းသာသနာ အတွင်းရှိ စာနီစု​ကျေးရွာ၌ ​ရေများလွမ်းမိုး
တောင်ယာကုန်းသာသနာအတွင်းရှိ ငကြွက်ကုန်း ရွာ မယ်တော်ဂူဖွင့်ပွဲ
copyright © Pathein Catholic Diocese.All rights reserved.
by cornerstone web solution